Malunga nathi - ShangHai Harmonic Machinery Co., Ltd.
IHarmonic Global ibonelela ngokuvelisa okuhle, oomatshini abazihambelayo, izixhobo zombane kunye nezinye iimveliso kunye nabanikezeli bezisombululo kwimarike yehlabathi. Inemithombo ekumgangatho ophezulu evela kwi-R & D ezininzi kunye nohlobo lokuvelisa amashishini aphezulu obuchwephesha. Ukuphendula kwinkqubela phambili yophuhliso lokudityaniswa koqoqosho lwehlabathi, kwagqitywa kwelokuba kusekwe ngo-2015 Shanghai Harmonic Intelligent Manufacturing Co., Ltd.yinto ebalulekileyo kwaye kuphela kwewindow yemarike yeqela phesheya. Ukugxininisa kwiingcali ezininzi kunye nokunamathela kumbono wequmrhu "weemveliso zorhwebo lwehlabathi kunye nabanikezeli bezisombululo", iHarmonic Global ikhule yaya kwishishini lenkonzo yokuvelisa yanamhlanje egxile kwimimandla emithathu yorhwebo kunye nenkonzo, ababoneleli besisombululo kunye nolungiselelo lwamanye amazwe.
Okwangoku, i-Shanghai Harmonic Intelligent Equipment Co., Ltd inamalungelo okuthengisa aphesheya kwe-Wuxi Hengyitong Machinery Co., Ltd., Nanjing Borong Automotive Electronics Co., Ltd. kunye ne-Nanjing Aolian AE &EA Co., Ltd. Iimveliso zibandakanya ukuchaneka izixhobo zokudlulisa kunye neebhokisi zeebhokisi zeemoto. , Icandelo leemoto kunye neemveliso zombane kunye nezombane ezine zeshishini, ishishini elibandakanya amazwe angaphezu kwe-30 kunye nemimandla eYurophu, eMelika, eAfrika, eAsia, njl., Ibaluleke kakhulu ekufezekisweni kwesicwangciso senkampani kwilizwe liphela.
I-Wuxi Hengyitong Machinery Co., Ltd.
I-Wuxi hengyitong Machinery Co., Ltd.iseWuxi, Jiangsu, China, yasekwa ngoMeyi 2012 ngenkunzi eyabhaliswayo ye-CNY yezigidi ezingama-60 kunye nommandla ongaphezulu kwe-10000 yeemitha zesikwere. U-Hengyitong unikwe izihloko zamashishini aphakamileyo kwezobuchwephesha kwiPhondo laseJiangsu kunye namashishini obuchwephesha abucala kwiPhondo laseJiangsu iminyaka emininzi.
Inkampani ikakhulu ibonelela ngendibano engaphantsi yabenzi basekhaya nakwamanye amazwe abenzi bokuhambisa iimoto kunye nokunciphisa okuphezulu okuphezulu, irobothi edibeneyo kunye nezinye izinto zokuhambisa izixhobo ezikrelekrele kwiinkampani ezinkulu ezingaqhelekanga kunye neenkampani zeerobhothi. Inkampani ineqela lezobuchwephesha le-R & D, elingasebenzisi kuphela iingcali zejapan zaseJapan ezivela kumzi mveliso osasazekayo njengabacebisi bezobuchwephesha, kodwa zikwanamathela kwintsebenziswano esondeleyo phakathi kolu shishino, iYunivesithi kunye namaziko ophando, kwaye inezobuchwephesha obunelungelo lobunikazi. Iimveliso zethu zithembekile kwaye zihlala ixesha elide. Okwangoku, inkampani ifumene i-IATF16949: 2016 inkqubo yolawulo lomgangatho eqinisekiswe yinkampani ye-NQA. Lishishini elibhalisiweyo kwaye eliqinisekisiweyo nguDeng Baishi ngekhowudi ye-544479953.
I-Nanjing Borong Automobile Electronics Co, Ltd.
I-Nanjing Borong Automobile Electronics Co, Ltd. ibekwe eNanjing, Jiangsu, China, yasekwa nge-Agasti ka-1996 ngekomkhulu elibhalisiweyo le-CNY 50 yezigidi kunye nendawo engaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-20000. I-Borong ipasile isiqinisekiso se-ISO / TS16949.
Inani elipheleleyo labasebenzi abangama-218, kunye nomatshini wokufaka ngokuzenzekelayo, umgca wemveliso ye-SMB, umgca we-welding we-PCBA, umzi-mveliso wokudibanisa, isityalo esiguga, igumbi elingena-duct, Uyilo lomthamo omkhulu wemveliso yeeyunithi eziyi-1.5 yezigidi ngonyaka.
Inkampani inezivumelwano ze-OEM kunye neemveliso ezaziwayo ezinje ngeKenwood, JVC, BOSCH kunye neGRUNDIG, zisebenzisanayo kwimveliso yeenkqubo zokuzonwabisa zomsindo, kwaye zithunyelwa ngaphandle kwiimarike zaseMelika, zaseYurophu nezaseAsia. Ukusukela ngo-2003, iye yaba ngumthengisi weVolkswagen kunye neFord, ebonelela ngeenkqubo zokuzonwabisa kwezithuthi kwintengiso yaseTshayina nakwimakethi yelizwe jikelele, kwaye iye yaba linani leemoto ezizimeleyo zaseTshayina kunye nomthengisi ophambili weelektroniki zeemoto e China.
Imbuyekezo Nanjing Aolian AE&EA Co., Ltd.
I-Nanjing Aolian Automobile Electronics kunye ne-Electrical Accessory Co., Ltd njengeshishini lobuchwephesha lasekwa ngoJuni 2001 eNanjing, kwiPhondo laseJiangsu. Inkampani eneemitha zesikwere ezingama-68000 zendawo yolwakhiwo lwezityalo kwaye inabasebenzi abangaphezu kwama-700 bebonke, kubandakanya abasebenzi bobuchwephesha abenza i-25% yenani labasebenzi. I-ALAE isidlulisile isiqinisekiso se-ISO 9001: 2000 QS ngoSeptemba 2001, ISO / TS16949 QS ngoNovemba 2004.
I-ALAE inenani labasebenzi betekhnoloji ephezulu yeziko lobuchwephesha lobuchwephesha be-Jiangsu, kunye nophando oluzimeleyo kunye nophuhliso kunye nokuqinisekiswa komthamo, nenani leemveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi.
I-ALAE ziingcali kwiR & D, ukuvelisa kunye nentengiso yemoto elektroniki kunye nezinto ezincedisayo zombane. Iimveliso eziphambili zibandakanya: Inkqubo yolawulo lwe-AC yemoto, indibano ye-elektroniki yokukhawulezisa, isilawuli sokuhambisa (i-AT / AMT), inkqubo yokuqalisa i-injini esezantsi-temp, kunye nezinye izixhobo zezithuthi zombane, uyilo kunye nokuveliswa kwesakhono sokubumba seplastikhi njl.